UChez Christian et Fanfan - I-Airbnb
UChez Christian et Fanfan
382 okushiwo abanye
Le Val-Saint-Père, Basse-Normandie, i-France
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Christian
U-Christian Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elisha, elingavamile futhi elinethezekile, elingaphakathi kwepulazi elidala laseNormand, amamitha angu-50 ukusuka osebeni lwe-MT ST Michel's. Ukufinyelela engadini engu-1500m2 kanye nokuPaka. Itholakala ku-4 km ukusuka edolobheni lase-Avranches kanye nama-20 km ukusuka e-MT ST Michel.
Ifulethi elisha elinabantu abangu-6. Lezi zinhlelo zenziwe ngumbazi wekhabhinethi, ilungu leqembu elaziwayo elithi "compagnons de devoir", ngendikimba yolwandle kanye neveli. Besifuna ifulethi elikhanyayo nelisebenza kahle ngenkathi sigcina ukuthandeka kwendlu yaseNorman ngezindonga zayo zamatshe.Igumbi linophahla olwehlelayo futhi likhanya ngamafasitela amabili. Kuhlanganisa umbhede wabantu ababili (140cm), umbhede osofa ababili (140cm), umtapo wolwazi kanye netafula elincane.Igumbi elikhulu, "indawo evulekile" ihlanganisa ikhishi, igumbi lokuhlala / lokudlela kanye negumbi lokuphumula.Ikhishi lisha futhi ligcwele ngokugcwele. ifakwe (uhhavini, 4 izihobhu zegesi, imicrowave, isiqandisi, itoaster, umenzi wekhofi, iketela ...) kanye netafula lebha kanye nezihlalo ezimbili.Igumbi lokuphumula lihlanganisa umbhede wosofa ongu-2PX (140cm), itafula lekhofi, izihlalo ezimbili , umata, isitiriyo esisha esincane, i-TV yesikrini esiyisicaba (usayizi 105cm).Igumbi lokudlela linetafula (elinokwengezwa) nezihlalo ezine. Igumbi lokugezela eli-1 elineshawa, indlu yangasese kanye nerediyetha yethawula.Ifenisha yasengadini, amabhayisikili, izihlalo kanye Izoso nazo ziyatholakala.Ekhishini sikunikeza izinongo eziyisisekelo (izinongo zikapelepele kasawoti, uwoyela, uviniga, itiye, ikhofi, ushukela njll ..)
umbhede oyidabulu engu- 1, omatilasi abangu- 2
4.82 out of 5 stars from 382 reviews
4.82 · 382 okushiwo abanye
Idolobhana elincane ngaphakathi kwe-Bay of Mont St Michel lapho abalimi abaningi bezimvu ze-salt meadow beqhubeka nemisebenzi yabo. Ichweba laseMont ST Michel liqhele ngamamitha angu-50 futhi ungathola futhi itheku ngendiza usuka esikhumulweni sezindiza esidumile esiqhele ngamamitha angu-200. Isikhungo samahhashi siqhele ngekhilomitha nje. Indawo yezentengiselwano yezindlu zase-Bay izitolo nezitolo ezinkulu njengeCarrefour, Lidl, Decathlon, etholakala ku-5km kude.
Umhlahlandlela wokuhamba uyatholakala efulethini.Ngaphezu kwalokho, sizojabula kakhulu ukukwazisa futhi sikululeke ngokuthokozela kwakho indawo yonke.
Hlola ezinye izinketho ezise- Le Val-Saint-Père namaphethelo